The Rohingya News Bank : Blinken
Showing posts with label Blinken. Show all posts
Joel Gehrke, Foreign Affairs Reporter
Secretary of State Antony Blinken is ordering most State Department personnel in Myanmar to leave the country after more than 100 people were killed by the regime during protests against the military junta.
“The actions that we’ve seen by the Burmese military in terms of its attacks on civilians are reprehensible,” Blinken told reporters Tuesday, using the name for the nation that military officials discarded inaprevious seizure of power. “Some people simply caught in the crossfire, others just expressing peacefully their views ... This followsaseries of other attacks and, indeed, increasingly disturbing and even horrifying violence.”
Labels: 2021, Blinken, en, Myanmar, News, Order, State Department Staff
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရိုဟင်ဂျာတို့အပေါ် Genocide ကျူးလွန်မှု ရှိ-မရှိ စိစစ်ရေးကြီးကြပ်ဖို့ ကန်ဝန်ကြီးသစ် Blinken သဘောတူ
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးသစ် Antony Blinken က သူ့ကို ရာထူး ရာထူး ခန့်အပ် ဖို့ အတည်ပြုရေး အ ထက်လွှတ်တော် ကြားနာ စစ်ဆေးပွဲမှာ ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလို တုံ့ပြန် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် အတည်ပြု ခန့်အပ်ခံရမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေက လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု မြောက်မမြောက် အမေရိကန် အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနတွေအကြား သုံး သပ်ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်တာကို ကြီးမှူးဦးဆောင် သွား မလားလို့ Massachusettes ပြည်နယ်၊ အထက် လွှတ် aတ်ာအမတ် Ed Murkey ရဲ့ မေးခွန်းအပေါ် Antony Blinken က ကြီးမှူးသွားမယ်ဆိုပြီး ဖြေကြားသွားတာပါ။
Labels: 2021, Blinken, Genocide, mm, ကျူးကျော်မှုရှိမရှိ, သတင်း